SomaliNet Magazine: TAARIIKH - SIDEE AYUU MARAYKANKU KU HELAY GUANTANAMO BAY (XABSIGII LA GEEYEY MAXAABIIXTII AFGAANISTA
Maxaabiistii uu Maraykanku ka soo qafaashay dalka Afganistaan waxaa la geeyey xarun ciidammada Maraykanku ay deggan yihiin oo ku taalla Guantanama Bay ee dalka Cuba. Dad badan waxa ay is waydiinayaan? iyadoo aan kulligeen wada ognahay in xiriirka Maraykanka iyo Cuba uu aad u xun yahay sida ay ugu suura gashay in Maraykanku ku yeeshaan xarun maraakiibta ciidamada ah (Naval Base).
Taarkiihda Guantanama Bay
Sannadkii 1898-kii ayaa dagaalkii waynaa ee Maraykanku la galay Spanishka waxa uu kaga qabsaday Xarunta Guantanamo Bay ee dalka Cuba. Cuba oo markaas iyaduna u dagaallamaysay xorriyaddeeda laakiin aan lahayn awood ay Spanishka isaga celiso ayaa ciidammada Maraykanka ku taageeray sidii Spanishka looga saari lahaa dalka Cuba. Guantanamo Bay oo sannadahaas ahayd goob ganacsiga ku fiican waxaa aad ugu dhowaa dekad Sonkorta laga dhoofin jiray oo la oran jiray Caimanera oo dhinaca galbeed ka xigtay, dhinaca barina waxaa ka xiga xaafad laga kalluumaysto oo la yiraahdo Fishermans? Point
Si haddaba uu Maraykanku u difaaco dadka iyo dalka Cuba oo Spanishku gumaysi xun ku hayay, waxaa sannadkii 1903dii Cuba iyo Maraykanku kala saxiixdeen heshiis dhigayay in Maraykanka laga iibiyo ama laga kireeyo Dhul xeebeed dagaalka ku fiican oo Maraakiibta dagaalkuna isticmaali karaan lagana qodan karo dhuxusha.
Heshiiskaas waxaa saxiixay madaxwaynihii Cuba Estrada Palma bishii Febrayo 16, sannadkii 1903-dii, iyo madaxwaynihii Maraykanka Theodore Roosevelt bishii February 23, sannadkii 1903. Sidaas ayaa maraykanku u soo degeen xarunta Guantanamo Bay iyo Bahia Honda. Sagaal sano kadib Maraykanku wuu iska dayacay Bahia Honda waxaana uu ku koobnaaday Guantanamo Bay. Heshiisku waxa uu dhigayay in Maraykanku ay u isticmaali karaan oo kaliya dhulka iyo badda ay kireysteen maraakiibta dagaalka iyo dhuxusha oo ay ka sameystaan oo kaliya, iyo in maraakiibta Cuba ay ku maraan xeebta canshuur la?aan.
Heshiisku waxa kale oo uu dhigayay in maraykanku ay bixiyaan lacag dhan 2,000 oo dollar sannadkiiba oo kiro ah. Guantanamo Bay waxa ay noqotay xeryaha ciidammada ee uu Maraykanku ku leeyahay dalka dibaddiisa tan ugu wayn. Sida kaliya ee lagu jabin karo heshiiskaan waa in labada dowladood si wada jir ah u saxiixaan heshiis kale oo lagu jabinayo xeerkii hore, taasna waxa ay u badan tahay in Maraykanku uusan waligiis ka tanaasuli doonin. Taasoo micneheedu yahay Guantanamo waa dhul iyo biyo ay dowladda Maraykanku leedahay.
Markii uu madaxwayne Fidel Castro la wareegay xukunka dalka Cuba dhammaadkii sannadkii 1950-kii ayaa waxaa bilowday in heshiiskii Maraykanka iyo Cuba uu wiiqmo. Waxaa dhacday in malleeshiyo reer Cuba ah oo uu hoggaaminayo nin la dhashay Fidel Castro ay dhowr jeer weerar ku qaadeen askar Maraykan ah ayna qaar ka qafaasheen. Waxaa xiriirkii labada dowladood aad u sii xumaaday markii uu Castro ku dhawaaqay inuu qaadanayo siyaasadda shuuciyadda ?communism?. I961-kii madaxwaynaha maraykanka Dwigh Ensinhoward ayaa ku dhawaaqay inuu jaray xiriirkii dibulumaasinnimo ee uu la lahaa dalka maraykanka. Wixii intaas ka dambeeyey waxaa magaalada Guantanamo labadeeda dhinac is hor fadhiyey ciidamada Maraykanka iyo kuwa Cuba.
Sannadkii 1962dii waxaa dowladda maraykanku amar ku bixisay in laga soo raro cid kasta oo maraykan ah?marka laga reebo ciidammada dagaalka?Guantanamo bay iyada oo madaxwayne J.F. Kennedy uu caddeeyey in madaafiicda Ruushka la soo galiyey dalka Cuba.
Dhibaato kale waxay dhacday markii uu madaxwayne Fidel Castro ka jaray biyihii iyo korontadii xarunta Guantanamo Bay isagoo raba inuu ka aarguto eedo uu ka tabanayay dowladda maraykanka. Wixii intaas ka dambeeyey Dowladda Maraykanku waxay ku dadaashay in xaruntu noqoto mid isku filan oo biyo iyo koronto ku filan soo saarta. Waxaa kaloo xarunta lagu sameeyey dibu dhis aad u wayn.?
Sidaas Darteed waxaa la oran karaa Guantanamo Bay waa dhul iyo biyo uu leeyahay Maraykanku. Si kasta oo uu heshiiska labada dal uu noqdaba, heshiiskii Guantanamo Bay wali waa jiraa waana jiri doonaa.